तपाईलाई थाहा छ?महिलाहरुले ब्लाउजभित्र पैसा घु’साएर किन राख्छन्? |
September 11, 2021 adminLeaveaComment on तपाईलाई थाहा छ?महिलाहरुले ब्लाउजभित्र पैसा घु’साएर किन राख्छन्?
बेलायतकी पूर्वप्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरले भनेकी थिइन, म नारी स्वतन्त्रता र आफ्ना लागि आफै नियम बनाउने विचारकी प’क्षपाती हुँ । मलाई चाहिएका समान सँगसँगै बोकेर राख्न ठूलो हण्ड ब्याग बोक्ने गरेकी छु ।बेलायती पूर्वप्रधानमन्त्री थ्याचरका लागि ह्याण्ड ब्याग बोक्ने कारण यहि भएपनि संसारभरीका महिलाका लागि भने नहुन पनि सक्छ । उनीहरुलाई लागि ह्याण्ड ब्याग बोक्नु झ’ञ्झटिलो पनि हुने गरेको छ ।
महिलासँग हुने ह्याण्ड ब्याग झ’ञ्झटिलो भनौ या सुविधा यसको प्रमुख कारण उनीहरुले पहिरने लुगामा प्रयाः गोजी हुदैन् । महिलाका लुगामा किन गोजी हुदैन् ? महिलाका धेरै जसो लुगामा गोजी हुदैन, केहीमा भएपनि नाम मात्रैको हुन्छ । केही खुद्रा पैसा बाहेक यसमा अरु केही अटाउदैन् । पश्चिमा देशरुमा सानो वा देखाउने किसिमको गोजी भएपनि पाइन्ट र ट्राउजर मात्रै हुन्छ ।
गोजी नभएकै कारण मोबाइल, सानो पर्स र साचो लगायतका स–साना सामान राख्न पनि महिलालाई गा’ह्रो हुने गरेको छ । जसले गर्दा केही महिलाले ब्लाउजभित्र घु’साएर राख्ने गरेका छन् । यो देख्दा र सुन्दा हसिमजा’क जस्तो लागेपनि महिलालाई भने साह्रै अ’प्ठ्यारो हुने गरेको छ ।
पहिले पहिले त पुरुषका लुगामा पनि गोजी हुने गरेको थिएन् । भारतमा अंग्रेज शासन शुरु भएसँगै गोजी राख्न थालिएको मानिन्छ, र त्यही बेलादेखि भे’दभाव पनि शुरु भएको हो ।पश्चिमा देशका महिलाहरुका कपडामा गोजी नभएकै कारण भारतीय महिलाका कपडामा गोजी राख्ने चलन शुरु भएन् । साना सामान ब्लाउजभित्र घु’साएर राख्ने गरेका छन् । यो देख्दा र सुन्दा हसिम’जाक जस्तो लागेपनि महिलालाई भने साह्रै अ’प्ठ्यारो हुने गरेको छ ।
बेलायती महारानी भिक्टोरियाको शासनकाल (सन् १८३७–१९०३) गोजीलाई पुरुषार्थका रुपमा लिने गरिन्थ्यो । समयसँगै पुरुषका कपाडमा त गोजीको प्रचलन शुरु भयो तर, महिलाका लागि भने भेद’भाव नै रह्यो । यो विभे’दसँग फेसनको पनि स’म्बन्ध छ । फेसन डिजाइनरहरु महिलालाई सुविधा हुने गरी नभइ शरीर सुन्दर देखिने गरी पोशाक बनाउने गरेका छन् ।
यसलाई पनि पु’रुषवादी मा’नसिकता भन्ने गरिएको छ । सन् १८४० देखि फेसन डिजाइनरहरुले महिलाका लागि ठूलो घा’टी, पातलो क’म्मर, किनारमा घेरदार लगाउने चलन शुरु भयो । यो विस्तारै महिलाको पोशाककै रुपमा हेर्न थालियो । त्यसपछि महिलाका कपडालाई स्त,न, पेट र हि,प्सलाई देखाउने गरी डिजाइन गर्न थालियो ।
भक्तपुरमा एउटै घरभित्र तीन जनाको श व फेला,यस्तो अवस्थामा भेटियो शव,हेर्नुहोस
नेपालमा अब हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा निश्चित,कुन कुन बार हेर्नुहोस्…
नेपालमा आउँदो पुस मध्यसम्म कोरोनाबाट ५० हजारको मृत्यु हुने अड्कलन।हजुर सुरक्षित हुनुहुन्छ कि नाइँ?एकचोटी अवश्य पढ्नुहोस